Dugsiyada Hoose (K-5) | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Minnetonka, waxaan ognahay in cunug walba uu yahay mid gaar ah, waana sababta aan ugu fidino barnaamijyo waxbarasho oo kala duwan si aan ugu soo saarno waxa ugu fiican. Waxaan ku faaneynaa lixda iskuul ee hoose si isku mid ah oo heer sare ah, mid walbana wuxuu siiyaa waxbarasho heer sare ah dhammaan carruurta. Degmadeennu kama duwana degmooyinka kale ee gobolka ama qarankaba. Laga soo bilaabo albaabka hore, dugsiyadeenu waxay umuuqdaan kuwa lamid ah, laakiin hoosta holalka waxaadna si deg deg ah uheli doontaa in iskuul kastaa yahay uruurinta barnaamijyo waxbarasho oo khaas ah oo loogu talagalay in lagu daboolo baahiyaha waxbarasho iyo danaha ilmahaaga.
Markay ardayda xanaanadu galaan Dugsiyada Minnetonka, waxay la yimaadaan kartiyo kala duwan, oo la mid ah kuwa xanaanada carruurta oo dhan; hase yeeshee, lixda sano ee soo socota, isbeddel ayaa dhaca. Markay ardaydeenu dhammaystiraan fasalka shanaad, celceliska ardaygu wuxuu gaarayaa lix heer fasal oo ka horreeya heerka qaran. Inta badan ardayda fasalka shanaad ee Minnetonka waxay wax ka akhriyaan heerka fasalka kow iyo tobnaad. Waalid ahaan, waa inaad ka rajeysaan koritaan sanad sanad gudihiis ah; laakiin Minnetonka, waxbarashadu way dedejisaa. Celcelis ahaan, ardayda Minnetonka waxay koraan kow iyo toban heer fasal lix sano gudahood. Waxaan runti bixinaa barnaamij waxbarasho oo gaar ah oo aan la leenahay barayaal heer sare ah, oo u adeegaya ardayda xiisaha leh ee bulshada qiimeysa waxbarashada. Ku barida xirfadaha aasaasiga ah ee akhriska iyo xisaabta da 'yar waxay albaabada u fureysaa fursado aan xad lahayn oo ka jira dugsiga dhexe iyo dugsiga sare.
Ardaydu waxay yimaaddaan dugsiga maalin kasta iyagoo xiisaynaya inay wax ku bartaan iyada oo laga filayo guriga in dugsigu muhiim yahay. Dugsiyadeenna hoose waxay adeegsadaan mabaadi'da Fasalka Kajawaabidda ah, luqadda guud ee laga filayo dabeecadaha, iyo barnaamijka Kahortagga Xoog-sheegashada ee Olweus si loo kobciyo bulsho waxbarasho oo ammaan ah, daryeel iyo taageero leh. Ku shubista ardayda hammi sare iyo rabitaan ah in loogu adeego wanaagga ugu weyn waa qiyamka asaasiga ah ee himiladeenna, oo lagu noolaa iyada oo loo marayo barashada adeegga iyo aqoonta dabeecadda ee fasal kasta. Ruuxda iskuulka ayaa badan. Midabbada dugsiyadeennu waa buluug iyo cadaan, Tonka Maalinta Jimcaha ee Tonka waa wax iska caadi ah lana wada dhiirrigeliyo waxayna kasbataa dareen degmo-ballaadhan oo bulshada ah.
Minnetonka, waxaan sidoo kale ku siineynaa adeegyada Daryeelka Carruurta Caafimaadka, Nafaqada, Gaadiidka iyo Baadhayaasha dhammaan ardayda dugsiga hoose. Waxaan bixinaa xulashooyin kaladuwan oo qado caafimaad leh oo caruurta baraya sida loo horumariyo caadooyinka cunida nolosha oo caafimaad qabta. Qoysaska ku jira xuduudaha degmada waxay xaq u leeyihiin adeegga baska ee Dugsiyada Minnetonka.
Dhammaan dugsiyadeennu waxay bixiyaan adeegyo waxbarasho oo dhammaystiran oo loogu talagalay ardayda leh baahiyaha gaarka ah, Ingiriisiga oo ah Luqad Labaad, Adeegyo Awood Leh (hibo iyo karti leh) iyo adeegyada taageerada ardayda. Barnaamijka Navigator ee ardayda hibada gaarka ah leh waxaa laga bixiyaa Dugsiyada Hoose ee Excelsior iyo Scenic Heights.
Booqashada dugsiyadeennu waa habka ugu wanaagsan ee lagu ogaan karo inay ku habboon tahay ilmahaaga. La kulan maamulaha, waxaad khibrad u leedahay farqiga u dhexeeya tikniyoolajiyadda fasalka dhexdiisa oo waxaad ka heshaa jawaabaha su'aalahaaga ku saabsan dugsiyada hoose ee Minnetonka.